Maitiro ekuCompress iyo PDF Faira neAdobe | Martech Zone
Kwemakore mashoma apfuura, ini ndaishandisa yakakura chechitatu-bato chishandiso kutsimbirira mafaera ePDF yekushandisa online. Kumhanya kunogara kuri chinhu online, saka kunyangwe ndiri kutumira email faira rePDF kana kuribata, ndinoda kuona kuti rakamanikidzwa.
Nei uchimanikidza PDF?
Kumanikidza kunogona kutora faira ine akawanda megabytes uye kuunza nayo pasi kumazana mashoma emakirobytes, zvichiita kuti zvive nyore kukambaira nemainjini ekutsvaga, zvichiita kuti ikurumidze kurodha pasi, uye ichiita kuti zvive nyore kubatanidza uye kurodha pasi kubva kuemail.
Dzimwe nguva vatengi vanondibvunza kuti ndeapi marongero akanakira kudzvanyirira kwePDF… asi ndisiri nyanzvi pakomesa uye kuisa kunze kwenyika, chokwadi ndinotadza kuziva pekutangira. Kana iwe uri pro uye unonzwisisa CCITT, Flate, JBIG2, JPEG, JPEG 2000, LZW, RLE, uye ZIP compression marongero… Ndine chokwadi kuti unogona kuzviona. Iko kune toni yezvinyorwa kunze uko.
Ini zvirinani kungoshandisa compression chishandiso kundiitira basa racho. Nekutenda, Adobe inopa izvo chete!
Maitiro ekuCompress PDF neAdobe Acrobat
Chandisina kuziva ndechekuti yangu Adobe Creative Cloud rezinesi ratove nechokumanikidza chishandiso chakavakwa mukati meAcrobat, Adobe chikuva chekugadzirisa, kugadzira, nekubatanidza maPDF. Kana iwe ukatora Acrobat, unogona kumanikidza yako PDF zviri nyore:
Vhura PDF mu Acrobat DC.
Vhura iyo Gadzirira PDF chishandiso chekumanikidza gwaro rePDF.
Sarudza Zvishandiso> Optimize PDF kana tinya pane chishandiso kubva kurudyi ruoko pani.
sarudza Deredza Faira Kukura mumenyu yepamusoro.
Set kugarisana kweAcrobat shanduro uye tinya OK. Default ichave kune iripo vhezheni.
sarudza Yepamberi Kugadziridza mumenyu yepamusoro yekuita zvigadziriso zvemufananidzo uye font kudzvanya. Dzvanya OK kana wapedza kugadzirisa.
Sarudza Faira> Sevha As. Chengeta iro rimwe zita refaira kuti nyora pasi razvino faira kana kutumidzazve iyo faira nyowani nediki rePDF saizi. Sarudza nzvimbo uye tinya Sevha.
Maitiro ekuCompress PDF neAdobe Online
Kana iwe une Adobe Creative Cloud rezinesi, haufanire kutora Adobe Acrobat kumanikidza maPDF ako! Adobe ine online chishandiso chaunogona kushandisa!
Ingo isa PDF neAdobe inozomanikidza uye kurodha pasi. Zvakanaka uye zviri nyore!
Dzvanya PDF Pamhepo
Tags: acrobat dckupiswaadobe acrobatadobe rekugadzira goreadobe onlineCCITTkumanikidza pdfcompression marongeroFlateJBIG2jpegJPEG 2000LZWPDFpdf kudzvinyiriraRLE